News - Uru nke Iron Teapot
Uru nke Nkedo Iron Teapot
Obere oge m rutere tii, otu enyi m mere ka m mata ebe a na-etinye ihe ọ Japaneseụ Japaneseụ ojii ndị Japan, ihe ụtọ ahụ dọtakwara m ozugbo. Ma amaghi m uru o bara, na ite igwe kariri oke. Site na nghọta m nwayo nwayo banyere ihe omimi nke tea na ihe omuma nke tii, m jiri nwayoo muta na abamuru nke ime tii n'ime ite di nke a di uku! Potgwè ite Ihe dị mma bụ na ọ nwere ike melite ogo mmiri n'ụzọ zuru oke ma welie ụtọ ụtọ tii. E gosipụtara n'ụzọ bụ isi n'ihe ndị a:
Uru nke ịme tii na ite mmiri na-agbanwe mmiri
1. Ugwu mmiri nsonazụ: Oke oyi akwa dị n’okpuru oke ohia na-ehicha mmiri nwere mmiri n’ime ya, ma ọ bụ iron ion dị iche iche na chlorine. Mmiri dị ụtọ dị ụtọ ma ọ bụ ya bụ ezigbo mmiri kacha mma iji me tii. Igwe ite nwere ike ịhapụ ion ndị nwere ike ịmịnye ion chloride na mmiri. Mmiri a sie na ite ígwè na isi iyi ugwu nwere otu ihe ahụ.
2. Mmetụta na mmiri okpomọkụ: potgwè ite nwere ike dịkwuo esi ebe. Mgbe ị na-eme tii, mmiri dị mma mgbe a na-agba ya ọhụrụ. N'oge nke a, isi ofe tii dị mma; ọ bụrụ na ọ sie ọtụtụ ugboro, gas na-agbaze (karịsịa carbon dioxide) na mmiri a na-ekpochapụ mgbe niile, nke mere na mmiri ahụ "ochie" na uto ọhụrụ nke tii ga-ebelata nke ukwuu. A na-akpọ mmiri na-adịghị ekpo ọkụ nke ọma “mmiri dị nro” ma adighi mma ịme tii na akwa mmiri. Tụnyere nkịtị teapots, ígwè ite nwere ndị ọzọ edo okpomọkụ conduction. Mgbe ị na-ekpo ọkụ, mmiri dị na ala na okpomoku na ọnọdụ gbara ya gburugburu nwere ike ịkwalite iji nweta ezigbo esi. Mgbe ị na-akụ teas dị ka “Tieguanyin” na “Old Pu’er Tea”, mmiri ọkụ ga-adị elu, yana “a na-agba ya n’oge ọ bụla” mmiri ga-eme ofe tii nke ezigbo mma ma ghara imezu arụmọrụ tii zuru oke yana obi uto kachasi nma;
Mgbe anyị siri mmiri ma ọ bụ mee tii n’ime ite mmiri, mgbe mmiri ahụ na-agba, iron ga-ewepụta ọtụtụ ion igwe nke na-agbanwe agbanwe iji gbakwunye igwe ahụ chọrọ. Ọ na-abụkarị ndị mmadụ na-enweta iron na-enweghị isi site na nri, ahụ mmadụ nwere ike ịmịkọrọ ihe dịka 4% ruo 5%, na ahụ mmadụ nwere ike ịmịkọrọ ihe dịka 15% nke ion ferric, yabụ nke a dị ezigbo mkpa! Ebe anyị maara na ị drinkingụ tii dị mma maka ahụike anyị, gịnị kpatara na anyị agaghị eme nke ọma?
N’ikpeazụ, achọrọ m ichetara gị mmezi na ojiji nke kettles iron: kettles ígwè ga-abụ ihe na-egbukepụ egbukepụ ma dịrị mfe ihicha ma ejiri ya rụọ ọrụ ogologo oge. Enwere ike iji nhicha akwa kpochaa elu ya, ya mere, nchara ígwè ahụ ga-eji nwayọọ nwayọọ pụta. Ọ dị ka ite aja aja na-acha odo odo na Pu'er tii. O nwekwara ume; a ghaghi idobe ya mgbe akwuchara ya. Zere ịsa ite ahụ dị ọkụ na mmiri oyi ma ọ bụ ịda site na ebe dị elu, ma A ghaghi iburu n'uche na ite ahu aghaghi akpọnwu ma mmiri adighi.